သူတို့ကိုအရည်ကျို - အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အားနည်းချက်များကို | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
လူတိုင်းတွင်အားနည်းချက်များ ရှိနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပျော်ရွှင်မှုနှင့်ညည်းသံကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကောင်းစွာသိကြသည်။ မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ အမျိုးသမီးများတွင်အားနည်းချက်များစွာရှိပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်သိတော့မည်။ ၎င်းတို့အနက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်မင်းတို့ပြောနိုင်သည်မှာသူတို့သည်အမျိုးသားများထက်သာလွန်သည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အမျိုးသမီးကိုမဆိုအစမှအဆုံးထိအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ရမည်။
နား၊ လည်ပင်းသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသောအားနည်းချက်များဖြစ်သည် အနည်းဆုံးတော့ဒါဇင်ဝက်လောက်ငါတို့စောင့်ကြည့်ရမယ် အနီးကပ်တက်နှင့်မည်သည့်အမျိုးသမီးကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခြင်းနှင့်နိုင်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုဂရုစိုက်ခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်သိ။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြမယ် အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အဓိကအားနည်းချက် ၁၀ ခု:
10 အဆိုပါစအိုဒေသ, အားနည်းချက်နှင့်များစွာသောကိစ္စများတွင်တားမြစ်သည်
ဆံပင်သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူမည်သည့်အမျိုးသမီးမဆိုအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းဒါကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူးဆိုရင်၊ အခုမင်းရဲ့ရည်းစားရဲ့ဆံပင်ကိုထိလိုက်ပါ, သင်၏ပရောပရည်သို့မဟုတ်သင်၏မျက်စိ chiribitas နေသောမိန်းမနှင့်သင်သူတို့မည်သို့အလွန်လက်ခံသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဆံပင်wellရိယာကိုကောင်းမွန်စွာထိတွေ့နိုင်သည့်အချိန်နှင့်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့ကအားကစားများလုပ်နေချိန်တွင်သူတို့၏ဆံပင်ကိုမထိခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၏နောက်ဆုံးတန်း၌သင်ရင်းနှီးရန်ကြိုးစားနေသည့်အချိန်များထက်ချွေးထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ။
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်လုပ်သကဲ့သို့ အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အားနည်းသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုပါကသူမ၏လည်ပင်းကိုဆွဲတင်ရမည်ဟုတ်တယ်၊ သူ့သွေးအားလုံးကိုကိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲသူ့ကိုနမ်းပြီးသူ့ကိုနမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
မိန်းမတကာ၏အားနည်းသောအချက်များမှာရှားပါးသောရှားပါးမှု မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုက်နိုင်သော၊ နို့စို့ခြင်း၊ မည်သည့်အမျိုးသမီးကိုမဆိုမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့စေပါ.
အမြဲတမ်းလိုပဲတစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်တို့ဟာများပြားလှတဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်မဖြစ်စေရဘူး။ ပြီးတော့စားလို့မရတဲ့နားရွက်တွေကိုလည်းဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ကကွေးနေသလိုမျိုးသူတို့နဲ့သားရဲလိုကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သူတို့ပြော လူတစ်ယောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအသံဖြစ်သည်။ ဒါကမင်းရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုတိုးတိုးလေးတိုးတိုးပြောပြီးအခွင့်ကောင်းယူပါ။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပုံရသော်လည်းတိုးတိုးပြောနေခြင်းသည်သင်၏ရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီး၏နားတွင်သူမကိုလုံးဝရူးသွပ်စေသည်။
ခေါင်းကိုစွန့်ပြီးဝမ်းဗိုက်နှင့်ဝမ်းဗိုက်anyရိယာသည်မည်သည့်အမျိုးသမီး၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအများစု၏အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုအနမ်းပေးခြင်း၊ သူတို့ကိုလျက်ခြင်းသို့မဟုတ်သေးငယ်သောကိုက်စားခြင်းပင်သင့်လက်တွဲဖော်အတွက်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။
သေချာတာပေါ့၊ အထူးဂရုစိုက်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားနည်းတဲ့အချက်ဖြစ်တာအပြင်ဝမ်းဗိုက်၊ ဝမ်းဗိုက်ကပြpointနာဖြစ်နိုင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ညစာစားပြီးတဲ့နောက်၊
ဝမ်းဗိုက်နှင့်ဝမ်းဗိုက်ရိယာ၏နောက်ကွယ်တွင်နောက်ဖက်ရှိအမျိုးသမီးများအတွက်အားနည်းချက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းသောအနှိပ်၊ အနမ်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါထိုးနှက်ခြင်းကမည်သည့်အမျိုးသမီး၏ကာကွယ်မှုကိုမဆိုအရည်ပျော်စေနိုင်သည်။
သငျသညျအခြို့သောအကြံဉာဏ်ကောင်းလိုလျှင်, အနည်းငယ်သောမုန့် (သို့) ရေနံသည်သင့်ကိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ကျောပေါ်သို့သွားရာတွင်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်.
ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်သလဲ၊ မည်သည့်မိန်းမတွင်မဆိုအနိမ့်ဆုံးသည်လိင်အင်္ဂါအပြင်ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်းနှုတ်ခမ်းများ ဟူ၍လည်း မဟုတ်ပါ။ သင်၏လက်ချောင်းများ၊ ပါးစပ်ဖြင့်သို့မဟုတ်စိတ်ထဲပေါ်လာသည့်အရာမှန်သမျှသည်အစည်းအဝေးတစ်ခု၏အဓိကအချက်ဖြစ်နိုင်သည် သို့မဟုတ်အားနည်းချက်အားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
ip အကြံပြုချက် - ဤinရိယာအတွင်းရှိသင်၏လိင်တံကိုထိခြင်းသည်သင်၏မိန်းမအတွက်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ မလိုအပ်ပါဘူး အလွန်ကြီးမားတဲ့ virile အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ရှိသည် ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်အလိုရှိသော်လည်းသင်၏လိင်တံကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်တိုးမြှင့်လိုပါကယခုအခါဖြစ်နိုင်သည် ဤနေရာတွင် နှိပ်၍ လိင်တံစာအုပ်၏မာစတာကို download လုပ်ပါ
ထပ်မံ၍ မိန်းမသည်သင်၏ခြေထောက်ပေါ်သို့လက်နက်ချခြင်းမသေချာပါကယောနိနက်ထဲမ ၀ င်ရန်သတိထားပါ။ အကယ်၍ သင်သူမကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ဝင်လျှင်အလွန်ဆိုးဝါးစွာအဆုံးသတ်နိုင်သည်။
ယောနိသည်အားနည်းသောနေရာများ၌အားအနည်းဆုံးဖြစ်လျှင်၊ ပေါင်ကိုထိုးခြင်း၊ နမ်းခြင်း၊ နမ်းခြင်းအားဖြင့်အတွင်းပိုင်းပေါင်ကိုနမ်းခြင်းသည်မည်သည့်အမျိုးသမီး၏မဆိုတားဆီးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ခြေထောက်ပေါ်ထိခြင်းသို့မဟုတ်နို့စို့ရန်အနည်းငယ်ရွံရှာခြင်းမခံရပါက၊ ဒီဟာသူတို့ထဲကတစ်ခုခုရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ယခုအခြေအနေနှင့်အခြေအနေ၊ တစ်ခုချင်းစီ၏အနံ့များပေါ် မူတည်၍ တစ်ကြိမ်ထက်မကသင်သူတို့ကိုချဉ်းကပ်ရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုပါသည်။
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း၏အန္တရာယ်မှာအနံ့ကြောင့်သာမကအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည် tickle များရှိပြီး၎င်းတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လျှင်အလွန်သတိထားရန်အလွန်သင့်တော်ပါသည်။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ပုံ
အန္တရာယ်, အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၌သင်အလည်အပတ်သွားခြင်း၏နောက်ဆုံးအားနည်းချက်မှာစအိုဒေသဖြစ်သည် ဒီရိယာထဲမှာ၊ ငါတို့ကိုသူတို့အနီးကပ်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်၊ သင်ကအရမ်းဂရုစိုက်ရမယ်.
အနည်းငယ် caresses အနည်းငယ်အနမ်းအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောထိတွေ့မှုကမည်သည့်အမျိုးသမီးကိုမဆိုအရည်ပျော်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အများစုသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစင်တီမီတာများစွာအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤနယ်မြေများမှတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုကိုခံနေရသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သူမပျောက်နေသည့်အရာအားသင်၏မိန်းကလေးအားပြသရန်ကြိုးစားပါ။
အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အားနည်းချက်များကိုလေ့လာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ထိုမိန်းကလေးသည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းပါက၊ လက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုဖြားယောင်းဘယ်လို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏အားနည်းချက်များကိုဘာတွေလုပ်နေလဲ
Danny JOSE ဟုသူကပြောသည်
DANNY JOSE သို့ပြန်ပြောပါ
ဘယ်အပိုင်းကပိုအထိခိုက်မခံတဲ့ဆံပင်အကြောင်းငါလိုချင်ပါသလဲ။ အကယ်၍ သင်သည် ၁၀ ခုထက် ပို၍ သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောဆွေမျိုးအားအမိန့်ကိုစတင်ရန်မည်သည့်အချက်မှရှင်းလင်းနိုင်လျှင်၎င်းသည်ကြီးလိမ့်မည်။ အလွန်ကောင်းသော post ကို။
Luis Abelardo ဟုသူကပြောသည်
Luis Abelardo ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ Anita ကိုမြည်းပေးချင်တယ်။ အဲဒီနောက်မှာငါမှာမြည်းမရှိဘူးဆိုတာသိပြီး xD ကိုစငိုတော့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း